तपाई मलाई किन सताउनुहुन्छ? | Lost Sheep for Christ
तपाई मलाई किन सताउनुहुन्छ?
तपाईं हाम्रो मालिकलाई किन सताउन जारी हुनुहुन्छ? के ख्रीष्टियनलाई वर्ष 2018 मा फेरि फेरि क्रूसमा लगाउनु पर्छ? के हामी आफ्नो इन्द्र शैतान र उनको सेनालाई समर्पण गरेको छ? माया गर्न के भयो? के यो पनि मरेको छ र घृणा अब गम्भीर छ? के परमेश्वरले आफैले हामीलाई हाम्रो ट्रयाकमा हामीलाई स्थिर पार्न चमकदार प्रकाशको वरिपरि छ? पश्चात्ताप र तपाईंको पापबाट टाढा! शैतानले टाढा बारी र पवित्रता को एक जीवन बाँचिरहेका छौं।
जब तपाईं आफ्नो बच्चाको रूपमा पहिलो पहिलो पाप पाप गर्नुहुन्छ, के तपाइँ सोच्नुहुन्न कि यसले सृष्टिकर्तालाई घृणा गर्दछ जसले तपाईंलाई प्रेम गर्छ? भन्न हामीले सजिलो छ कि यो पाप पापको वास्तविक पापको कारण हो। हामी सबैसँग मृत मानव प्रकृति हो, तर परमेश्वरले हामीलाई जंगली ब्रितुहरू (जनावरहरू) जस्तै हुन सृष्टि गर्नुभएन। हामी छवि र भगवानको समानतामा बनाइएका छौं ( उत्पत्ति 1: 26-27 ) उहाँले हामीलाई कारण र वरदानको साथ दिनुभएको छ। यो हाम्रो अभिभावकको अनाज्ञास्पद थियो जुन सृष्टिकर्ताले अनुग्रह गुमायो। तर उहाँले हामीलाई बचाउनुभयो जब उहाँले हामीलाई बचाउनको लागि आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाउनुभएको संसारलाई पठाउनुभयो ( लूका 23: 32-38 ) हाम्रो मालिकले तिमीलाई पुछिदिनुभयो, र अन्तमा तपाईंको निम्ति मर्नुभयो!
के तपाईंले येशू क्रूसबाट बोलाउनुभएको छैन सुन्नुहुन्छ? के तपाईं एक रूखमा पर्खिरहेका जीवित ईश्वरको पुत्र देख्नुहुन्न? उसलाई चोट लागेको छ उसलाई हेर! आफ्नो अनुहार मास्टर बाट टाढा नगर्नुहोस् । तिनको टूटेको शरीर हेर्नुहोस्। तिनको शरीर तत्वहरूलाई उजागर गरिएको छ। पसीना आफ्नो सबैभन्दा पवित्र रगत संग आफ्नो पवित्र खुट्टा को तल मा टाँस्दै छ। उहाँलाई चोट लागेको छ उसलाई हेर्नुहोस्! जब तपाईंले आफ्नो पहिलो चीज भण्डारबाट चुराउनुभयो, वा जब तपाईले तपाइँको आमाबाबुलाई झूट बोल्नुभयो। हाम्रो पहिलो पाप हाम्रो खुट्टामा चोट लागेको छ कि कील थियो! त्यसोभए हामीले पीडादायी र त्रासशील छौं हामी तपाईंलाई भगवान ईश्वर “देवता जस्तो बनने” हाम्रो इच्छाले अन्धामा राख्नुभयो। हामी बच्चाहरु को रूप मा झूठ को शब्दहरु को विश्वास को रूप मा झूठ बोल्छन। हामीलाई हाम्रो पहिलो विद्रोहबाट क्षमा गर्नुहोस्।
जब हामीले हाम्रा आमाबाबु र हाम्रो चर्चलाई बेवास्ता गर्दछौं। हामी सोच्छौं कि हामी राम्रो जान्दछौं। हामी सोच्दछौं कि हामीलाई कुनै कुरा बताउन परमेश्वरको आवश्यकता छैन। हामी हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। हामीले जीवन दिन र मृत्यु दिनको लागि शक्ति छ। ठुलो कुमारी! के तपाईंको बुबा सुतान छ ? यो कालोपन तपाईंको हृदयमा कसरी छ? जब तपाईंलाई आवश्यक भएमा ती मानिसहरूलाई मद्दत गर्न इन्कार गर्दा, तपाई सही काम गर्न इन्कार गर्नुहुन्छ।जब तपाईं मनोनयनको जीवनको सट्टा मृत्युको संस्कृति गहिरो छनौट गर्नुहुन्छ। “तिमीले किन मलाई सताउँछौ?” के तपाईंले मेरो बुबाको रूपमा प्रेम गर्नुभएन र मैले तपाईंलाई आफ्नो आमा गर्भमा बनाएको छु? ( भजन 13 9: 13 “तपाईंले मेरो भित्री भागहरू बनाउनुभयो। तपाईंले मलाई मेरो आमाको गर्भमा सँगै बनाउनुभयो। “) तैपनि, यस खुल्ला नफरतको साथ तपाईंले मेरो दाहिने हात, मेरो दाहिने हातले तिमीलाई आशीर्वाद दिनुभयो। मेरो दाहिने हातले पुजारीलाई तपाईंको उद्धारको पानीले बप्तिस्मा लिएको थियो!
जब तपाईं टाढा जानु भयो र स्वार्थी बच्चा हुनुभयो। हामी नग्न र यस अस्पतालमा बिरामीलाई हेर्छौं र तिनीहरूको लागि केहि गर्दैनौं! वास्तवमा, हामीसँग अस्पतालमा भएका परिवारका सदस्यहरू छन् र हामी कानूनको लागि उनीहरुलाई मार्न को लागी आशा गर्दछौं। हामी उनीहरूलाई जीवित राख्न को लागी थकित थियौ। “उनीहरूले यस संसार छोडेर उनीहरूले अझ राम्रो महसुस गर्दछन्, उनीहरूले अब पीडा पाउनेछन्” तपाईं पिलातस ! तुरुन्तै तपाईं आफ्नो हातबाट रगत धोएर हुनुहुन्छ, तर तपाईंको अपराध अझै बाँकी छ! तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईंका पापहरू मलाई थाहा छैन? के तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं यसलाई आफ्नो आत्मामा गहिरो लुकाउन सक्नुहुन्छ, कि येशूलाई थाहा छैन? ( मत्ती 10: 26-31 – “त्यसकारण तिनीहरूबाट डराउँदैन, किनकि केही लुकेको छ कि प्रकट हुने छैन , वा लुकेको त्यो ज्ञात हुनेछैन। म तिमीलाई अन्धकारमा भन्छु, डेलाइटमा बोल्नुहोस्; तपाईंको कानमा के छक्क पर्यो, छतबाट घोषणा गर्नुहोस्। शरीरलाई मार्नेहरूलाई डराउनुहोस् तर आत्मालाई मार्न सक्दैन। बरु, जसले आत्मा र शरीर दुवै नरकमा नाश गर्न सक्छ भन्ने डर राख्नुहोस्। के दुई भाँडामा पनीको लागि बेची छैन? तैपनि तिनीहरूमध्ये कोही पनि तपाईंको बुबाको हेरविचार बाहिरको जमीनमा पस्नेछैनन्। र तिम्रो टाउको धेरै बाघहरु पनि गिनिएका छन्। त्यसैले नडराऊ तपाईं धेरै भौंराहरू भन्दा बढी मूल्यको हुनुहुन्छ। ” हामीले आफ्नो बायाँ हातमा कील खान्थ्यौं। बायाँ हातले येशूले आफ्नो जीवनमा तपाईंलाई छुनुभयो, जब उहाँले तपाईंलाई निको पार्नुभयो। उहाँले प्रार्थनाको जवाफ दिनुभयो। जब उनले एउटा हराएको प्रेम ल्याउन चर्चमा एक फिर्ता ल्याए!
जब हामी संसारमा दुष्टलाई समर्थन गर्छौं किनभने यो हाम्रो आवश्यकताको लागि लोकप्रिय वा उपयुक्त छ, हामी येशूलाई आफ्नो पवित्र शिरमा काँडाको मुकुट दिन्छौं ! हामी हाम्रो विवेकलाई मार्न सक्छौं किनभने हामी परमेश्वरका सट्टा हाम्रो जीवनमा अन्य चीजको स्वागत गर्दछौं। “तपाईंले मलाई किन सताउनुहुन्छ?” जब उहाँले स्वर्गमा आफ्नो सिंहासनमा बस्नुभयो, उहाँले तपाईंको हरेक चाल हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ सबै भन्दा ठूलो वरदान छ जुन उहाँका हरेकको लागि छ। उहाँले देख्नुहुन्छ कि तपाईं एक महान डाक्टर हुनुहुन्छ, एक वकील, एक महिला जसले संसारमा गरिबहरूलाई मदत गर्नेछ। अफ्रिकाका जवान मान्छे वैज्ञानिक बनेका छन् र एड्सको उपचार पाउन सक्नेछन्।एक देशको नेता जसले शान्तिलाई बढावा दिनेछ र सबैले उहाँलाई आफ्ना पवित्र चर्चमा सतावट र हानिकारक धम्कीको साथ पुर्याउन अनुमति दिन्छ। तर हामीले दुखाइको मार्गहरू चुनेका छौं! हामी उहाँको जस्तै बन्न चाहन्छौं तर सबै प्रकारका दुष्ट काम गरौं। हामी दुष्टलाई बढावा गर्छौं र राम्रो भन्छौं। हामी जो हाम्रा विरुद्धमा र चाँडै जानुपर्छ भने, यदि उनीहरूले हाम्रो मार्ग पछ्याउँदैनन् भने, हामी कोलोसमहरू फिर्ता ल्याउन र शेरहरूमा फेरि फ्याँकौं। हामी मानव मशाको रूपमा फेरि तिनीहरूलाई जीवित जलाउनेछौं!
“तिमीले किन मलाई सताउँछौ?” हामी उहाँलाई अस्वीकार गर्दा उहाँलाई सबैभन्दा बढी चोट पुर्याउँछौं, हामी प्रेमलाई अस्वीकार गर्दछौं कि उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी उहाँप्रतिको प्रेमलाई अस्वीकार गर्छौं। के तपाईं येशूका आँखाबाट आँसु देख्न सक्नुहुन्छ, क्रसबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? ऊ तिमीलाई देखिरहेको छ बच्चा। उहाँ तिमीहरूको लागी बनाउनुभएको छ, जो तिम्रो लागि हेरचाह छ र तिमीलाई प्रेम गर्दछु। जब तिमी बलात्कृत हुनुभयो उहाँ उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। जब तिमी लड्नुभयो उहाँ उहाँसंग हुनुहुन्थ्यो। जब तपाईं थकेका र भोका र गरिब थिए उहाँ उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। जब तपाईं तपाईंको सम्पूर्ण मान्छे, तिम्रो परिवार र साथीहरु लाई मारेमा उहाँ संग तपाई हुनुहुन्थ्यो।जब तपाईं दास हुनुभयो र कडा मेहनतमा बाध्य हुनुभयो उहाँ उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। जब तपाईं अकेला हुनुहुन्थ्यो र जानुभयो त्यहाँ कुनै ठाउँ थिएन। जब तपाई बालबालिकालाई बाँच्न चाहानुहुन्छ उहाँ आफ्नो साथमा छोड्नुभयो, तर कसलाई जान्न को लागी थाहा थिएन। त्यो जीवनमा मार्गको सबै चरणमा तपाईं संग थियो। उहाँ एक पाश्चात, एक बौद्ध, एक मुस्लिम एक हिन्दू, एक यहूदी र एक ईसाईको रूपमा थिए। उहाँले तपाईंलाई ती सज्जन शब्दहरू उहाँसँग बोल्न चाहानुहुन्छ, “यदि येशू साँच्चै हुनुहुन्छ भने, आफैलाई मलाई थाहा छ” र उहाँ क्रसबाट तल आउनुभयो र तपाईंलाई सुन्नुभयो। तिमीलाई निको पार्नुभयो र तिमीलाई माया गर्छु।
हाम्रो मीठा येशू हाम्रो लागि पर्याप्त छ! आउनुहोस् हामी हाम्रा पापहरूबाट टाढा र हाम्रो परमेश्वरलाई क्षमाको निम्ति सोधौं। उहाँ हाम्रो बहुमूल्य रगतले हामीलाई धोएर तयार पार्नु हुन्छ र हाम्रो रोबोट सेतो बर्फको रूपमा बनाउनुहुन्छ। जस्तै सेन्ट जॉनको क्रस ने कहा “जब पनि तपाईंलाई केहि असहयोगी वा असन्तुष्ट हुन्छ, क्रिश्चियन सचेत सम्झनुहोस् र चुस्त रहनुहोस् ” आउनुहोस् हामी अब हाम्रो मास्टरलाई चोट लागेनौं। तपाईंको पापबाट फर्काउनुहोस् र येशू ख्रीष्टको सुसमाचार गल्ती गर्नुहोस्!
← ध्यान 12/16/2018
Meditasjon 12/16/2018 →